Uefa Nations League - Experience Best News from Nepal
Uefa Nations League बाट
पहिलो पटकको यूएफा नेसन्स लिगको उपाधि पोर्चुगलले जितेको छ भने बार्सिलोनाका ३ खेलाडीको उपस्थिती उक्त फाइनल खेल नेदरल्याण्ड र पोर्चुगलको खेलमा रहेको थियो । बार्सिलोनाका विकल्प गोल रक्षक जास्पर किलेस्सेन, अर्को सिजनका मिडफिल्डर फ्रान्की डी जोंग साथै डिफेन्डर नेल्सन...
पहिलो नेसन्स लिगको उपाधि पोर्चुगललाई !! रोनाल्डोको दोश्रो अन्तराष्ट्रिय ट्रफी
नेसन्स लिग पोर्चुगलले नेदरल्याण्डलाई फाइनलमा १-० ले हराउदै उपाधि हासिल गरेको छ । जितका निम्ति एक मात्रै गोल गोंकालो गुइडेसले गरेका थिए । पोर्चुगलबाट रोनाल्डोका निम्ति दोश्रो अन्तराष्ट्रिय ट्रफी रहेको हुदा उक्त खेल रोनाल्डोका निम्ति निकै महत्वपूर्ण रहेको थियो ।...
नेसन्स लिगको तेश्रो स्थानमा बस्न सफल बन्यो इंग्लिश टोली । स्विजरल्याण्डलाई पेनाल्टी मार्फत हराउदै नेसन्स लिगको चौथो स्थान ओगट्न सफल भएको हो । ९० मिनेटको खेलमा कुनै गोल नहुदा खेल अतिरक्त समयमा गएको थियो । पुन अतिरक्त समयमा समेत...
यूएफा नेसन्सको तेश्रो स्थानका निम्ति भिडन्त सुरु हुदै
नेसन्स लिग पहिलो संस्करण अन्तर्गत पहिलो फाइनल इंग्ल्यान्ड विरुद्ध स्विजरल्याण्ड भिड्दै छन् । नेदरल्यान्डसंग इंग्ल्यान्ड पराजित भएको थियो भने पोर्चुगलसंग स्विजरल्याण्ड पराजित भएको थियो । नेपाली समय अनुसार ६:४५ बाट पहिलो फाइनल स्विजरल्याण्ड र इंगलिस टिम भिड्दै छन् ।...
प्रथम पटक र पहिलो सस्करणको रुपमा यूएफाले सुरु गरेको राष्ट्रिय लिग खेलको फाइनल नजिकिदै छ । नेपाली बार र दिन अनुसार आइतबार साँझ ६:४५ बजे स्विजरल्याण्ड र इंग्ल्यान्ड तेश्रो स्थानका लागि र प्रथम अनि दोश्रो स्थानका निम्ति राती १२:३०...
सनसनीपूर्ण र नाटकीय सेमिफाइनल !! नेदरल्याण्ड बन्यो पोर्चुगलको फाइनल प्रतिद्वन्दी !!
यूएफा नेसन्स लिग अन्तर्गत आज भएको दोश्रो सेमी फाइनल खेल डच टोलीले इन्ग्लिश टोली माथि ३-१ गोल अन्तरले जितेको छ । यस जितसंगै नेदरल्याण्डले पोर्चुगलसंगको फाइनलका निम्ति बाटो तय गरेको छ । आइतबार राति हुने खेलमा पोर्चुगल र नेदर्ल्यंद...
रोनाल्डोको ह्याट्रिक र पूर्ण नेसन्स सेमीफाइनल, ५ कुरा जुन उक्त खेलले सिकाउछ !!
यूएफा नेसन्स लिग रोनाल्डोको ह्याट्रिक गोलसंगै पोर्चुगलले यूएफा नेसन्स लिगको फाइनल प्रवेश गरेको छ, फाइनल यही आइतबार राति १२:४५ मा हुदै छ । तेश्रो र चौथोका निम्ति हुने प्रतिस्पर्धा समेत आइतबार नै हुनेछ । विभिन्न भीएआर नाटक हुदै गर्दा रोनाल्डोले...